အသက် ၂၀ နောက်ပိုင်းနဲ့ ၃၀ ဝန်းကျင်ယောင်းတွေ မဖြစ်မနေသိသင့်တဲ့ Skin Barrier အကြောင်း… – For her myanmar
Posted on May 20, 2019 May 20, 2019 Author Hnin Ei Oo	Comment(0)
ခုမဖတ်လိုက်မိရင် နောက်မှ နောင်တရမယ်နော်.. 😛
အမျိုးသမီးလေးတွေရဲ့အသားအရေက အသက် ၂၀ ကျော်ကနေစတင်ပြီး ကော်လဂျင်နဲ့ အသားအရေကိုတင်းရင်းစေတဲ့ဓာတ်တွေ လျော့လာတယ်ဆိုတာကို ယောင်းတို့သိကြတယ်ဟုတ်? ဒီလိုနဲ့ပေါ့ပေါ့လျော့လျော့နေလာရင်းကနေ အသက် ၂၅ လောက်လည်းကျရော ဇရာကသိသာထင်ရှားလာပြီး မျက်လုံးနားတစ်ဝိုက်နဲ့ Smile line နားလေးတွေမှာ အရေးအကြောင်းတွေ ထင်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဇရာရဲ့လက္ခဏာရပ်ထဲမှာ ဒီအရေးအကြောင်းထက် ပိုအရေးကြီးတာရှိနေပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဒီဆောင်းပါးလေးရဲ့ခေါင်းစဉ် Skin Barrier လို့ခေါ်တဲ့ အရေပြားရဲ့ အပြင်ဘက်ဆုံးအလွှာ ကောင်း/မကောင်းပါပဲနော်။
တခြား ရှည်ရှည်ဝေးဝေးတွေမပြောခင် ဘာကိစ္စနဲ့ ဒီ Skin Barrier အကြောင်းကို ခမ်းခမ်းနားနားကြီးလေ့လာနေရတာလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကို အရင်ပြောပြမယ်နော်။ Skin Barrier ဆိုတာဟာ တကယ်တမ်းပြောရရင် ယောင်းတို့လိမ်းလိုက်တဲ့ စကင်းကဲအားလုံးရဲ့အသက်လို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူကလိမ်းသမျှစကွင်းကဲပစ္စည်းတွေကို အသားအရေထဲကနေပြန်မထွက်အောင် ထိန်းချုပ် (Lock) လုပ်ပေးထားမှာဖြစ်ပြီး အကယ်၍ ဒီ Skin Barrier မကောင်းရင်တော့ ဘယ်လောက်ဈေးကြီးပြီး ကောင်းပေ့ဆိုတဲ့ ပစ္စည်းသုံးပါစေ ဘယ်လိုမှအသားအရေကပြန်မကောင်းနိုင်ပါဘူး။ အဲ့တော့ ကိုယ်သုံးသမျှထိရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ Skin Barrier ကိုအရင်ကောင်းအောင် ကုသပေးရပါမယ်။
Related Article >>> အိပ်ရာခင်းတွေ၊ခေါင်းအုံးစွပ်တွေကို တစ်လဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက် သန့်ရှင်းရေးလုပ်သင့်လဲ?
ဝေးလံခေါင်ဖျားတွေရှင်းပြနေရင် နားရှုပ်ကုန်မှာစိုးလို့ Skin Barrier ကို စာကြောင်း ၅ ကြောင်းနဲ့ပဲ အတိုရှင်းပြလိုက်မယ်နော်။
(၁) Skin Barrier ဆိုတာ မျက်နှာအသားအရေရဲ့ အပြင်ဘက်ဆုံးအလွှာဖြစ်ပြီး မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အလွှာဖြစ်ပါတယ်။
(၂) ဒီ Skin Barrier လေးက ပြင်ပကနေဝင်လာမယ့် နေဒဏ်၊ လေဒဏ်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဒဏ်တွေအပြင် ဖုန်၊ သဲ နဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေကိုလည်း အလွှာတစ်ခုအနေနဲ့ ကာကွယ်ပေးပြီး ယောင်းတို့လိမ်းလိုက်တဲ့ စကွင်းကဲတွေကို လေထုကပြန်မစုပ်သွားအောင်၊ ပြန်မထွက်သွားအောင် ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ အလွှာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၃) အကယ်၍ ဒီ Skin Barrier မကောင်းရင်လည်း ဘယ်လောက် ရေသောက်သောက်၊ ရေဓာတ်ဖြည့်ဖြည့် အသားအရေက မွဲခြောက်ခြောက်နဲ့ အနီစက်၊ အမာရွတ်နဲ့ အမည်းစက်လေးတွေ ထွက်လာတာမျိုး အသားအရေက တစ်နေရာနဲ့တစ်နေရာ မညီညာဘဲ ယားယံနေတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်တာမို့ ယောင်းတို့ရဲ့မျက်လုံးနဲ့ပဲ သိသိသာသာမြင်နိုင်၊ ခံစားနိုင်ပါတယ်နော်။
(၄) Skin Barrier ကောင်းနေရင်လည်း ဝက်ခြံ၊ အမာရွတ်လေးတွေ ရှိနေသည့်တိုင်အောင် အသားအရေက ချောချောမွေ့မွေ့လေးနဲ့ ညီညာနေမှာဖြစ်ပြီး ရေဓာတ်လည်းပြည့်နေပါလိမ့်မယ်။
(၅) ဒီလို Skin Barrier အားတွေကလည်း ၂၅ နှစ်နောက်ပိုင်းမှာ စတင်ပြီးယုတ်လျော့လာပါတယ်တဲ့။
Related Article >>> ၅ မိနစ်အတွင်း ဟာကွက်မရှိ ဖက်ရှင်ကျသွားအောင် ဘယ်လိုဝတ်ကြမလဲ?
Skin Barrier တွေကဘာကြောင့်ပျက်စီးတာလဲ?
ခုနက နှင်းပြောခဲ့သလို အသက်အရွယ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်သလို စိတ်ဖိစီးမှု၊ နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အပြင် ကိုယ်သုံးနေကျ Skincare ပစ္စည်းက ဓာတုပစ္စည်းတွေအရမ်းများနေပြီး ပြင်းထန်နေတာမျိုးဆိုရင်လည်း ဒီ Skin Barrier ကိုပျက်စီးစေပါတယ်။
Vitamin B3၊ Ceramide၊ Niacin စတာတွေပါဝင်ပြီး အားပျော့တဲ့ စကွင်းကဲတွေကို အဓိကထားအသုံးပြုပေးပြီး မျက်နှာကိုရေနွေးနွေးလေးနဲ့ဆေးတာမျိုး၊ မျက်နှာကို ညင်ညင်သာသာနှိပ်နယ်ပေးတာမျိုးတွေ လုပ်သင့်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အသားအရေကိုအားဖြည့်ပေးမယ့် ငါးကြီးဆီ၊ သံလွင်ဆီနဲ့ Nuts လေးတွေကိုလည်း စားပေးသင့်ပါတယ်နော်။ Skincare ပစ္စည်းလေးထဲမှာ ခရင်မ်လေးကိုပဲ ထည့်ပြီးသုံးပေးရင် ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ တော်တော်လေးစုံသွားလောက်ပြီ ထင်ပါရဲ့။ ဒီ Skin Barrier ကြီးက ယောင်းတို့ရဲ့ အသားအရေကောင်းမယ်၊ မကောင်းနိုင်ဘူးဆိုတာကို အများဆုံး အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်တာမို့ အထူးဂရုစိုက်ပြီး သတိထားပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ယောင်းတို့ Anti-Aging စကွင်းကဲတွေ ကောင်းကောင်းထိရောက်ဖို့ဆိုရင်လည်း ဒါကအရမ်းအရေးကြီးတာမို့ သေချာဂရုစိုက်စေချင်တဲ့ စေတနာလေးနဲ့ ခပ်များများလေးရေးလိုက်တာပါ။
ခုမဖတျလိုကျမိရငျ နောကျမှ နောငျတရမယျနျော.. 😛
အမြိုးသမီးလေးတှရေဲ့အသားအရကေ အသကျ ၂၀ ကြျောကနစေတငျပွီး ကျောလဂငျြနဲ့ အသားအရကေိုတငျးရငျးစတေဲ့ဓာတျတှေ လြော့လာတယျဆိုတာကို ယောငျးတို့သိကွတယျဟုတျ? ဒီလိုနဲ့ပေါ့ပေါ့လြော့လြော့နလောရငျးကနေ အသကျ ၂၅ လောကျလညျးကရြော ဇရာကသိသာထငျရှားလာပွီး မကျြလုံးနားတဈဝိုကျနဲ့ Smile line နားလေးတှမှော အရေးအကွောငျးတှေ ထငျလာတတျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဇရာရဲ့လက်ခဏာရပျထဲမှာ ဒီအရေးအကွောငျးထကျ ပိုအရေးကွီးတာရှိနပေါတယျ။ အဲဒါကတော့ ဒီဆောငျးပါးလေးရဲ့ခေါငျးစဉျ Skin Barrier လို့ချေါတဲ့ အရပွေားရဲ့ အပွငျဘကျဆုံးအလှာ ကောငျး/မကောငျးပါပဲနျော။
တခွား ရှညျရှညျဝေးဝေးတှမေပွောခငျ ဘာကိစ်စနဲ့ ဒီ Skin Barrier အကွောငျးကို ခမျးခမျးနားနားကွီးလလေ့ာနရေတာလဲ ဆိုတဲ့အကွောငျးလေးကို အရငျပွောပွမယျနျော။ Skin Barrier ဆိုတာဟာ တကယျတမျးပွောရရငျ ယောငျးတို့လိမျးလိုကျတဲ့ စကငျးကဲအားလုံးရဲ့အသကျလို့တောငျ ပွောလို့ရပါတယျ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူကလိမျးသမြှစကှငျးကဲပစ်စညျးတှကေို အသားအရထေဲကနပွေနျမထှကျအောငျ ထိနျးခြုပျ (Lock) လုပျပေးထားမှာဖွဈပွီး အကယျ၍ ဒီ Skin Barrier မကောငျးရငျတော့ ဘယျလောကျဈေးကွီးပွီး ကောငျးပဆေို့တဲ့ ပစ်စညျးသုံးပါစေ ဘယျလိုမှအသားအရကေပွနျမကောငျးနိုငျပါဘူး။ အဲ့တော့ ကိုယျသုံးသမြှထိရောကျခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဒီ Skin Barrier ကိုအရငျကောငျးအောငျ ကုသပေးရပါမယျ။
Related Article >>> အိပျရာခငျးတှေ၊ခေါငျးအုံးစှပျတှကေို တဈလဘယျနှဈကွိမျလောကျ သနျ့ရှငျးရေးလုပျသငျ့လဲ?
ဝေးလံခေါငျဖြားတှရှေငျးပွနရေငျ နားရှုပျကုနျမှာစိုးလို့ Skin Barrier ကို စာကွောငျး ၅ ကွောငျးနဲ့ပဲ အတိုရှငျးပွလိုကျမယျနျော။
(၁) Skin Barrier ဆိုတာ မကျြနှာအသားအရရေဲ့ အပွငျဘကျဆုံးအလှာဖွဈပွီး မကျြစိနဲ့မွငျရတဲ့အလှာဖွဈပါတယျ။
(၂) ဒီ Skin Barrier လေးက ပွငျပကနဝေငျလာမယျ့ နဒေဏျ၊ လဒေဏျနဲ့ ပတျဝနျးကငျြဒဏျတှအေပွငျ ဖုနျ၊ သဲ နဲ့ ဘကျတီးရီးယားပိုးမှားတှကေိုလညျး အလှာတဈခုအနနေဲ့ ကာကှယျပေးပွီး ယောငျးတို့လိမျးလိုကျတဲ့ စကှငျးကဲတှကေို လထေုကပွနျမစုပျသှားအောငျ၊ ပွနျမထှကျသှားအောငျ ကာကှယျပေးထားတဲ့ အလှာတဈခုပဲဖွဈပါတယျ။
(၃) အကယျ၍ ဒီ Skin Barrier မကောငျးရငျလညျး ဘယျလောကျ ရသေောကျသောကျ၊ ရဓောတျဖွညျ့ဖွညျ့ အသားအရကေ မှဲခွောကျခွောကျနဲ့ အနီစကျ၊ အမာရှတျနဲ့ အမညျးစကျလေးတှေ ထှကျလာတာမြိုး အသားအရကေ တဈနရောနဲ့တဈနရော မညီညာဘဲ ယားယံနတောမြိုးတှေ ဖွဈတတျတာမို့ ယောငျးတို့ရဲ့မကျြလုံးနဲ့ပဲ သိသိသာသာမွငျနိုငျ၊ ခံစားနိုငျပါတယျနျော။
(၄) Skin Barrier ကောငျးနရေငျလညျး ဝကျခွံ၊ အမာရှတျလေးတှေ ရှိနသေညျ့တိုငျအောငျ အသားအရကေ ခြောခြောမှမှေ့လေ့ေးနဲ့ ညီညာနမှောဖွဈပွီး ရဓောတျလညျးပွညျ့နပေါလိမျ့မယျ။
(၅) ဒီလို Skin Barrier အားတှကေလညျး ၂၅ နှဈနောကျပိုငျးမှာ စတငျပွီးယုတျလြော့လာပါတယျတဲ့။
Related Article >>> ၅ မိနဈအတှငျး ဟာကှကျမရှိ ဖကျရှငျကသြှားအောငျ ဘယျလိုဝတျကွမလဲ?
Skin Barrier တှကေဘာကွောငျ့ပကျြစီးတာလဲ?
ခုနက နှငျးပွောခဲ့သလို အသကျအရှယျကွောငျ့လညျးဖွဈတတျသလို စိတျဖိစီးမှု၊ နထေိုငျမှုပုံစံနဲ့ ပတျဝနျးကငျြအပွငျ ကိုယျသုံးနကြေ Skincare ပစ်စညျးက ဓာတုပစ်စညျးတှအေရမျးမြားနပွေီး ပွငျးထနျနတောမြိုးဆိုရငျလညျး ဒီ Skin Barrier ကိုပကျြစီးစပေါတယျ။
Vitamin B3၊ Ceramide၊ Niacin စတာတှပေါဝငျပွီး အားပြော့တဲ့ စကှငျးကဲတှကေို အဓိကထားအသုံးပွုပေးပွီး မကျြနှာကိုရနှေေးနှေးလေးနဲ့ဆေးတာမြိုး၊ မကျြနှာကို ညငျညငျသာသာနှိပျနယျပေးတာမြိုးတှေ လုပျသငျ့ပါတယျ။ နောကျပွီး အသားအရကေိုအားဖွညျ့ပေးမယျ့ ငါးကွီးဆီ၊ သံလှငျဆီနဲ့ Nuts လေးတှကေိုလညျး စားပေးသငျ့ပါတယျနျော။ Skincare ပစ်စညျးလေးထဲမှာ ခရငျမျလေးကိုပဲ ထညျ့ပွီးသုံးပေးရငျ ပိုအဆငျပွပေါလိမျ့မယျ။
ဒီလောကျဆိုရငျတော့ တျောတျောလေးစုံသှားလောကျပွီ ထငျပါရဲ့။ ဒီ Skin Barrier ကွီးက ယောငျးတို့ရဲ့ အသားအရကေောငျးမယျ၊ မကောငျးနိုငျဘူးဆိုတာကို အမြားဆုံး အဆုံးအဖွတျပေးနိုငျတာမို့ အထူးဂရုစိုကျပွီး သတိထားပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ယောငျးတို့ Anti-Aging စကှငျးကဲတှေ ကောငျးကောငျးထိရောကျဖို့ဆိုရငျလညျး ဒါကအရမျးအရေးကွီးတာမို့ သခြောဂရုစိုကျစခေငျြတဲ့ စတေနာလေးနဲ့ ခပျမြားမြားလေးရေးလိုကျတာပါ။
Tagged 20s, 30's, anti aging, barrier, late, layer, protection, skin
အိမ်တိုင်းမှာတော့ရှိတယ်..ဘယ်သူမှ မသုံးသေးတဲ့ အံ့ဖွယ်အသားအရေထိန်းသိမ်းပစ္စည်း
Posted on February 23, 2017 March 17, 2017 Author
သုံးရတာလဲ လွယ်သလို ဈေးလည်းမကြီးဘူးနော် ?
ချင်းကို သုံးပြီး ဆံပင်သန်အောင် လုပ်ကြမယ်…
Posted on April 18, 2019 April 18, 2019 Author Ei Mon
သွားတွေ အမှန်တကယ်ဖြူလာစေဖို့ နည်းလမ်း (၄) သွယ်
Posted on March 17, 2017 Author Miko
တကယ်ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေမို့လို့ သုံးရတာ အဆင်ပြေမှာပါ။
မိုးရာသီမှာ ကမ်းခြေဘက်ကို ခရီးထွက်မယ်ဆိုရင် ဒါတွေ ပြင်ဆင်ထားပါ။